लामो समय टेबल र कम्प्युटरमा काम गर्नेलाई ढाडको समस्या हुन्छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता लामो समय टेबल र कम्प्युटरमा काम गर्नेलाई ढाडको समस्या हुन्छ
on: July 06, 2018 अन्तरवार्ता
लामो समय टेबल र कम्प्युटरमा काम गर्नेलाई ढाडको समस्या हुन्छ
डा. गौरवराज ढकाल, सहप्राध्यापक, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
डा. गौरवराज ढकाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानअन्तर्गतको राष्ट्रिय ट्रमा सेण्टरमा सहप्राध्यापकका रूपमा कार्यरत छन् । भारतको कोलकातामा स्पाइन ट्रेनिङ सकेपछि उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको कोलम्बिया युनिभर्सिटी र जापानको टोयामा युनिभर्सिटीबाट एड्भान्स स्पाइन ट्रेनिङ लिएका थिए । स्पाइन ट्युमरमा विशेषज्ञता हासिल गरेका उनले विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा स्पाइनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका प्रस्तुति गरेका छन् । उनले श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र नेपालमा स्पाइनसम्बन्धी कक्षा लिइसकेका छन् । प्रस्तुत छ, ढाड दुखाइ र स्पाइन इञ्जुरीबारे डा. ढकालसँग आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
स्पाइनका मुख्य समस्या के कस्ता छन् र तपाईंकोमा कस्ता बिरामी बढी आउँछन् ?
मकहाँ अधिकांश बिरामी गर्दन र ढाड दुखाइ भएर उपचारका लागि आउँछन् ।
टाउकोको पछाडिको भाग गर्दनदेखि तल मेरुदण्डको पुच्छरको हड्डीसम्मको भाग स्पाइन हो । यसलाई मेरुदण्ड पनि भनिन्छ । मेरुदण्ड नसा, हड्डी, कुर्कुरे (डिस्क) र मांसपेशीले हाम्रो शरीरको स्पाइन बनाउँछ । स्पाइन भएन भने सीधा उभिन, बस्न र हातखुट्टा चलाउन सकिँदैन ।
मेरुदण्डका हड्डीका मांसपेशी (प्यारास्पाइनल मसल्स) र स्पाइनल कर्ड (मेरुदण्डको नसा)बाट निस्किएका नसाका हाँगा गर्दनदेखि तल कम्मरसम्म पुगेका हुन्छन् । गर्दनसम्म पुगेको नसाको हाँगाले हात चलाउने र कम्मरसम्म पुगेको हाँगाले गोडा चलाउने काम गर्छ । समग्रमा यस किसिमको प्रक्रियालाई स्पाइन भनिन्छ । मेरुदण्डको सबैभन्दा भित्र स्पाइनल कर्ड (नसा) हुन्छ । मेरुदण्डको नसाको वरिपरि पानी हुन्छ, जसलाई सीएसएफ भनिन्छ । त्यसको वरिपरि कभर हुन्छ । यसलाई ड्युरा भनिन्छ ।
गर्दन र ढाड दुखाइको प्रमुख कारण के हो ?
गर्दन र ढाड दुख्नुको ८० देखि ९० प्रतिशत कारण मांशपेशीको कमजोरी हो । एउटै प्रकारको लामो बसाइ र बसाइ नमिल्दा यस्तो समस्या आउँछ ।
सबै पेशा व्यवसायमा लागेकाहरूलाई ढाड तथा गर्दन दुख्ने समस्या हुन्छ ?
मकहाँ उपचारका लागि आउने ढाड र गर्दन दुखाइका ७० प्रतिशत बिरामी टेबल वर्क गर्ने वर्गकै छन् । दिनभर टेबल र कम्प्युटरमा घोत्लिँदा यो समस्या देखिन्छ । मैले त यसलाई कार्यालय र बैङ्कउपज रोग नै भन्ने गरेको छु । लामो समयसम्म एउटै आसनमा अर्थात् मेचमा बसेर लगातार काम गर्द यो समस्या आइपर्छ ।
यो रोग बढीजसो बैङ्क र अफिसमा काम गर्नेलाई नै किन लाग्छ ?
जब लामो समयसम्म एउटै बसाइ आसनमा काम गरिन्छ, तब मांसपेशीमा दबाब पर्छ र मांसपेशी कमजोर हुन थाल्छ । यसले गर्दा लामो समय कम्प्युटर र टेबल वर्क गर्नेलाई यो समस्या देखापरेको हो ।
जीवनशैली पनि ढाड र गर्दन दुखाइको कारण बन्छ ?
अवश्य पनि अस्वस्थकर जीवनशैली अपनाउनेलाई यो समस्या आइपर्छ । विशेषगरी धूमपान गर्ने र मोटरसाइकल चढ्नेहरूमा यो समस्या बढी देखिएको छ ।
ढाड र गर्दन दुखाइको उपचार के कसरी हुन्छ ?
ढाड दुखाइ र गर्दन दुखाइ भएका बिरामीले स्पाइन सर्जनसँग उपचारको परामर्श गर्नुपर्छ । विशेषज्ञसँग परामर्श गरी उपचार गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । ढाड र गर्दन दुखाइसम्बन्धी अधिकांश उपचार केही समयको औषधि सेवन र फिजियोथेरापीमार्फत गर्न सकिन्छ । सही बसाइ र मासंपशी तथा स्पाइन मजबूत बनाउन उपचार केन्द्रित हुन्छ ।
जीवनशैली सुधार्न के सुझाव दिनुहुन्छ ?
एउटै शैलीमा ४५ मिनेटभन्दा बढी बस्नु हुँदैन । प्रत्येक ४५ मिनेटमा उठ्ने र जिउ तन्काउने गर्नुपर्छ । साथै, केही क्षण विश्राम दिँदै केही बेर हिँड्नुपर्छ । कम्प्युटर र टेबलमा काम गर्नेका लागि मेच उचित प्रकारको हुनुपर्छ । तल–माथि गर्न लिफ्टको भन्दा बढी भ¥याङको प्रयोग गर्नुपर्छ । साथै, धूमपान छोड्ने, शारीरिक क्रियाकलाप बढाउने गर्नुपर्छ ।
ढाड दुख्नुको अन्य कारण के हुन सक्छ ?
दिनभरिको भागदौड तथा धेरैपटक उठबस गर्नाले पनि वयष्कलाई धेरै ढाड दुख्ने गर्छ । त्यसैगरी, एकै ठाउँमा बसेर लामो समयसम्म कम्प्युटर प्रयोग गर्ने, कम्प्युटरमा काम गर्दा सही तरीकाले नबस्ने, पटकपटक दायाँ–बाँया घुम्ने, निहुरिने, सामान उठाउने–राख्ने, लामो समयसम्म उभिरहने गर्नाले पनि ढाड दुख्ने समस्या तीव्र हुन्छ । त्यसबाहेक यी कारण पनि ढाड दुख्न सक्छ :
डिप्रेशन वा बेचैनी
लामो समयसम्म एकै ठाउँमा बसेर गर्ने काम
अत्यधिक शारीरिक श्रम
ढाड दुख्ने समस्याबाट बच्ने उपायबारे स्पष्ट पारिदिनुहोस् न !
आफूलाई फिट राखेर पनि ढाड दुख्ने लगायत विभिन्न समस्याबाट बच्न सकिन्छ । नियमित रूपमा शारीरिक कसरत गरेर तथा बसाइ व्यवस्थित गरेर पनि ढाड दुख्ने समस्या कम गर्न सकिन्छ । ढाड दुख्ने समस्याबाट बच्ने अर्को राम्रो उपाय आफूले काम गर्ने ठाउँलाई आरामदायी बनाउनु हो । काम भइरहेका बेला शरीरलाई तन्काउने, आराम दिलाउने, झुक्दा होश पुर्‍याउने तथा सही आसनमा बस्ने गर्नुपर्छ । यसैगरी स्वस्थ खानपानले शरीरलाई अतिरिक्त तौल बढ्नबाट नियन्त्रण गर्नुका साथै शरीरमा अतिरिक्त दबाब पर्न दिँदैन ।
सुत्ने तरीकामा सामान्य सुधार ल्याएर पनि ढाड दुख्ने समस्या नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । विशेषगरी बेला बेला दायाँ–बायाँ फर्केर तथा खुट्टाको बीचमा तकिया राखेर पनि ढाड दुख्ने समस्या कम गर्न सकिन्छ । तनावका कारण पनि ढाड दुख्ने समस्या हुने भएकाले योग ध्यान गर्ने, लामो लामो सास लिने गर्नुपर्छ । यसले तनाव त कम हुन्छ नै, दिमागसमेत शान्त रहन्छ । यसैगरी लामो समयसम्म कुर्सीमा नबस्ने, निहुरेर धेरै काम नगर्ने र लुगा टेबलमाथि राखेर धुने गर्नाले ढाड दुखाइबाट बच्न सकिन्छ । यसैगरी सुत्ने ओछ्यान धेरै साह्रो हुनु हुँदैन । टीभी हेर्दा र पढ्दा पल्टिने गर्नु हुँदैन ।
(डा. ढकाललाई प्रत्येक सोमवार र बिहीवार राष्ट्रिय ट्रमा सेण्टरमा र ५ बजेपछि ओम् अस्पतालमा भेट्न सकिन्छ ।)
ahileko pariprekshyama dherai upayogi ani prabhabkari sandesh……tq Dr.Gaurav.